Somaliland: Jamaal C. Xuseen Oo Muuse Biixi Iyo Ganacsade Ina Aw Siciid Ku Eedeeyey Shirqool Ay Ku Burburinayaan Saldanadda Subeer Awal Iyo Xisbiga UCID - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Jamaal C. Xuseen Oo Muuse Biixi Iyo Ganacsade Ina Aw Siciid...
“Muuse Biixi Iyo Ina Aw Siciid Baa Kow Ka Ah Shirqoolka UCID Lagu Burburinayo, Ninka Fidnada Somaliland Ah Waa Ina Aw Siciid”..Jamaal
“Maanta Ina Aw Siciid Waxaan U Sheegayaa, Ragga Haddii Aad Godob Ka Gashid Ha Filin In Sidaa Maalkaagu U Soconayo”..Jamaal C.X
Musharraxa Madaxweyne ee Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa Guddoomiyaha xisbiha KULMIYE Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo Ganacsade Maxamed Siciid Geeddi waxa uu ku eedeeyey in ay fara galin ba’an ku hayaan xisbigiisa UCID isaga oo ganacsade Ina Aw Siciid si gaar ah ugu eedeeyey in uu yahay fidno Somaliland lagu soo dhex tuuray sida uu hadalka u dhigay.
Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen, Musharraxa Madaxweyne ee Xisbiga UCID waxa uu sidan ku sheegay shir jaraa’id oo uu shalay ku qabtay Hargeysa waxaanu yidhi: “Awalba waynu ogayn in Muuse Biixi si badheedh ah u doonayay in uu u burburiyo xisbiga UCID, sidii uu u soo burburiyey xisbigii KULMIYE ee uu u lahaa hebel iiga reeba, hebel iiga reeba in uu maantana doonayo in uu u burburiyo xisbiga UCID oo uu yidhaahdo Musharrax baan samaynayaa waraabe u taag ah. Waxay ka dhigan tahay marka kubbad la ciyaarayo oo la yidhaa kaasi wuu iga badinayaaye kaa kale ayaan doonayaa in uu kubadda ula ciyaaro. Waa dhaqan siyaasadeed aynaan waligeen arag oo ay ka muuqato caga jugleyn iyo digteetarnimo iyo afduub dimuquraadiyadeed. Xisbiga UCID hogaankiisii waa kala saartay. Dadna waa hogaanka xisbiga, dadka waa Musharraxiin. Muuse afkiiba kuma badali karo. Muusow raganimadaada isku soo tag, cidda kula tartamaysa aduu dooran mayside”.
Intaa kadib Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen waxa uu si ba’an u eedeeyey Ganacsade Maxamed Siciid Geeddi waxaanu yidhi: “Waxa waxaaba igaga daran oo aan doonayaa in aan maanta umaddayda u caddeeyo ninka Muuse dabada ka wada oo Somaliland oo dhanna ka aamusan tahay. Somaliland oo dhanna dheeraad ku ah. Maalkiisuna fidno ku yahay dalka Somaliland. waa ninka la yidhaa Ina Aw Siciid weeyaan. Ina Aw Siciid waxa uu iska takooray ganacsatadii reer Somaliland oo dhan. Waa nin siyaasaddii faraha la galay. Waa nin raba cidda uu dabada ka wadaa in ay kursiga fuusho. Waar wayno arki jirnay cid cid taageerta, xaq baanu u leeyahay qofku cidda uu doonayo in uu taageeraa. Laakiin in uu yidhaahdo cid kale soo burburi. Maxamed Siciid waxa uu kow ka yahay shirqoolka xisbiga UCID lagu burburinayo. Ninka maalka soo dhiibaya ee fidnada ah waa isaga weeyi. Maanta Ina Aw Siciid waxaan halkan uga sheegayaa ragga haddii aad godob ka gashid ha filin in sidaa maalkaagu u soconayo” ayuu yidhi Jamaal Cali Xuseen.
Dhinaca kale Jamaal Cali Xuseen waxa uu Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE Mujaahid Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyey in uu isagu ka dambeeyey shirqool uu sheegay in lagu ridayay saldanadda Subeer Awal. Isaga oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: “Waxaad og tihiin in maalin dhawayd suldaan waraabe u taag ah uu isagu (Muuse) Ka Dambeeyey oo xisbigii KULMIYE-na qirtay oo yidhi cadaabaha ayaan ka waraabinayaa ciddii na hor is taagta. Waa dhacdooyin ugub ku ah Somaliland. Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Diiriye waa suldaankii yidhi KULMIYE hala taageero, maantana ninka ay leeyihin cadaabaha ayaanu ka waraabinaynaa cidda aan na taageerin waa isaga. Waa nimanka bilaabay in ay qoyskii Suldaanka isku diraan ee nin kale huteel ku caleemo saaray”.
Taleefanka Gacanta Oo Loo Isticmaali Karo Fure Guri !
Somaliland: Faysal Cali Waraabo Oo iftiimiyay Qodobada Daahsoon Ee Ay Ka Wada Hadleen Safiirka Ingiriiska U Fadhiya Itoobiya
Somaliland: Suldaanka Guud Ee Beelaha Cabdiraxmaan Sacad Oo Maanta La Caleemo Saaray + Sawiro
Somalia: Baarlamaanka Puntland oo kulan ka yeeshay xaalada Tuka-raq